कोरियामा कोरोना त्रास |
Sunday, February 23, 2020 । सोल,दक्षिण कोरिया
दक्षिण कोरियाको राजधानी सोलदेखि ३ सय किलोमीटर दक्षिणको ख्याङसान क्षेत्रमा पर्छ थेगु सहर । यही सहरमा काम गर्ने आङपासाङ शेर्पा केही दिनयता निकै बेचैन छन्, कारण सहरमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ।कोरियाको चौथो ठुलो सहर थेगुमा विभिन्न कम्पनीहरू छन् ।
दक्षिण कोरियाको डाइगुमा मास्कसहित जेब्रा क्रसिङमा ट्राफिक सङ्केत कुर्दै स्थानीय नागरिक तस्वीर : रोयटर्स
कामका लागि कोरिया पुगेका विभिन्न देशका कामदारको यहाँ उल्लेख्य उपस्थिति छ । तर थेगुमा केही दिनयता ह्वात्तै फैलिएको कोरोना सङ्क्रमणका कारण ती कामदार त्रासमा बसिरहेका छन् ।
थेगुमा शनिबार मात्रै २ सय २९ जनामा भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कोरियामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ४ सय ३३ पुगेको छ । थेगु नजिकैको छाङदोको छाङदो थेनाम अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ जना अस्पतालका कर्मचारी र १ सय २ जना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएका छन् । थेगु र छाङदोमा मात्रै ३ सय ५३ सङ्क्रमित छन् ।
भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि थेगु आसपासका कम्पनीले कामदारलाई बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । थेगुमा झण्डै २५ लाख मानिस बसोबास गर्छन् । थेगु र आसपासका क्षेत्रमा ७ हजार नेपाली ईपिएसमार्फत काम गरिरहेका छन् । भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा सहरमा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुन थालेको थेगुमै काम गरिरहेकी पार्वती वाइबाले बताइन् । ‘हामीआज धेरै दिनपछि तरकारी किन्न निस्किएका थियौं । भनेजस्तो सामान नै नपाउने । पाउरोटीहरू पनि छैनन् । जे भेट्टायो त्यही लिएर आयौं । पहिलाजस्तो बजारमा सामान नै छैन,’ उनले गुनासो गरिन् । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
पत्रपत्रिका चैत २१ गतेसम्म बन्द
६६ देशबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध
उपत्यकाबाट गाउँ फर्कने बढे
हल्लामै बजार अनियन्त्रित
विद्यालय बन्द, एसईई चालू, नयाँ भर्ना गर्न नपाइने
१. लकडाउन उल्लंघन गरेर मदिरा बिक्री र सेवन गर्नेलाई पक्राउ
२. दाउरा खोजेर गुजरा गर्दै बालक
३. सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ : पुर्वमन्त्री महत
४. किसानको बालि भित्र्याउन अवरोध नगर्न सांसद यादवको आग्रह
५. विदेशबाट आएका निस्फिक्री हिँड्दा स्थानीय त्रसित
६. सञ्चार क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन प्रेस युनियनको आग्रह